Fitsapana ny lomom-boankazo-macrolides-quinolones-erythromycin - BALLYA
LMQE 4 Sensors
Kitapo fitsapana ho an'ny côtexamine + Macrolides + Quinolone + Erythromycin Combo
1. Inona ny fitsapana Combo amin'ny lomom-boankazo?
2. Inona no atao hoe Lincoln?
3. Inona ny macrolides?
4. Inona no atao hoe Quinolone?
5. Inona ny Erythromycin?
6. Ny fahasimban'ny Lincolnomy, Macrolides, Quinolone ary Erythromycin
7. Endri-kevitry ny fitsapana Combo ho an'ny Zeomyromisin Macamineides Quinolone
8. Fomba fitiliana ny fitsapana Combo ho an'ny Kailomisinina Macrolides Quinolone Erythromycin
9. santionany amin'ny fitsapana combo ho an'ny makomyides macomyides quinolone erythromycine
10. Famerana ny famaritana ny test amin'ny Comboolone macrolides Quinolone Erythromycin Combo
11. Ny maha-zava-dehibe ny fanandramana Combo amin'ny testosteron Quomyolone Erythromycin
12. Ireo mpiorina amin'ny fitsapana combo ho an'ny makrôzinina macrolides Quinolone Erythromycin
13. Fitaovana ho an'ny fitsapana Combo ho an'ny Lincolnomy Macrolides Quinolone Erythromycin
14. Ahoana ny fomba fampiasana ny fitsapana combo amin'ny lomotra?
16. Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana Combo amin'ny fanaovana lomotra?
Inona ny fitsapana comboomyamine macrolides quinolone erythromycin test?
Kit Sensor 4, haingana hamantatra karazana residu antibiotika efatra amin'ny ronono sy vokatra vita amin'ny ronono amin'ny alàlan'ny teknolojia fiarovana-chromatography volamena colloidal. Raha vao 7-10 minitra ny valiny.
Inona no atao hoe Lincoln?
Lincoln manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria ary misy fiatraikany amin'ny bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria miabo tsara sy bakteria gram-ratsy anaerobic sasany. Miasa amin'ny bakteria anaerobika sy cocci-positive gram izy io.
Izy io dia tsy mandray tsara amin'ny vavony, ary mifantoka be amin'ny bile sy diky izay mety hiteraka korontana mora amin'ny tsinay. Rehefa mihena ny asan'ny aty sy ny voa dia maharitra ny antsasaky ny fiainana.
Izy io dia afaka manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria, ary misy fiatraikany amin'ny bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria miabo tsara sy bakteria gram-ratsy anaerobika.
Ny vokatry ny bakteria amin'ny bakteria miabo tsara dia mitovy amin'ny erythromycine. Ny bakteria saro-pady dia misy ny Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Diphtheria, sns.
Ny bakteria anaerobika mora tohina amin'ity vokatra ity dia misy Bacteroides, Fusobacterium, Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Peptostreptococcus, ankamaroan'ny peptococcus, Perfringens, Tetanus, ary bakteria actinomycetes sasany sns.
Staphylococcus dia afaka mampivelatra tsimoramora ny fanoherana an'ity vokatra ity. Ny staphylococcus mahazaka erythromycine dia matetika mampiseho fanoherana an'io vokatra io.
Inona ireo macrolides?
Macrolides dia kilasin'ny antibiotika misy lactone Macrocyclic. Ny vondrona mety ho macrolide sy ny derivatives siramamy dia mifandray amin'ny fatorana glycoside hamorona antibiotika macromolecular.
Izy io dia kilasin'ny antibiotika alika malemy novokarin'i Streptomyces. Ny antibiotika macrolide ankapobeny dia fitambaran'ny lipophilic alkaly. Ny antibiotika Macrolide dia manana fiasa mahery manohitra ny bakteria Gram-positive sy Mycoplasma.
A. Ny taranaka voalohany an'ny antibiotika macrolide. Manokana, misy erythromycins, izay matetika ampiasaina amin'ny olana ara-pisefoana, ary koa ny josamycin sy acetylspiramycin. Raha ampitahaina amin'ny erythromycin, ireo antibiotika macrolide ireo dia misy fiatraikany tsara amin'ny bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina, fa ny poizina atiny dia mbola miharihary ary mety hiteraka fanapoizinana.
B. Ny taranaka faharoa amin'ny antibiotika macrolide. Ity taranaka misy antibiotika macrolide ity dia nanjary zava-mahadomelina manan-danja amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana ary vitsy ny fiatraikany ratsy. Raha ny tena izy, ny klithithomisinina, ny roxithromycine, ny azithromycine, sns., Dia misy vokany mitovy amin'ny erythromycine, saingy nanatsara ny asan'ny bakteria, nanitatra ny fihanaky ny bakteria, mora tohin'ny fitantanana am-bava ary miorina amin'ny asidra.
C. Ny taranaka fahatelo amin'ny antibiotika macrolide. Ity taranaka misy antibiotika macrolide ity dia mampahafantatra vondrona ketônan'ny karbaona faha-3 an'ny erythromycin hahazoana derivatives macrolide ring 14-membered, toy ny Taili Mycin mahazatra. Ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina vokatry ny Streptococcus pneumoniae mahatohitra erythromycine. Tsy dia mahatohitra io andiana antibiotika macrolide io.
Inona ny Quinolone?
Quinolones ny zava-mahadomelina dia manondro zava-mahadomelina anti-bakteria misy sentetika 4-quinolones. Izy ireo dia fungicides quiescent miaraka amin'ny spectrum antibacterial malalaka, hery mahery vaika mahery, fifantohana anaty sela, fifohana am-bava tsara, ary tsy misy crossover miaraka amin'ny fanafody famonoana bakteria mahazatra mahazatra, vokarin'ny bakteria lava, ary fihenan-tsakafo vitsy kokoa.
Izy io dia azo zaraina amin'ny taranaka efatra arakaraka ny filaharana: ny taranaka voalohany dia asidra nalidixic novolavolaina tamin'ny 1962, izay nesorina noho ny tsy fahampian'ny fitrohana, ny poizina avo lenta ary ny voka-dratsy ateraky ny bakteria; ny taranaka faharoa dia piperidine namboarina tamin'ny 1973 asidra Pipemidic, sns., izay ampiasaina indrindra amin'ny tsinay sy ny otrikaretina tazomoka vokatry ny bakteria gram-négatif; ny taranaka fahatelo dia fluoroquinolones, toy ny norfloxacin sy ciprofloxacin, izay natomboka hatramin'ny taona 1980, toy ny Ofloxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Fleroxacin, Sparfloxacin, sns.
Ny literatiora sasany dia miantso ny fluoroquinolones novokarina hatramin'ny faran'ny taona 1990 ka hatramin'izao dia taranaka fahefatra, toa ny Moxifloxacin sy Gemifloxacin, gatifloxacin, sns.
Ny quinolones dia bakteria, izay misy vokany miharihary amin'ny bakteria amin'ny dingana mijanona ary ny fitomboana sy ny fiterahana.
Na dia nidina ho amin'ny ambaratonga tsy azo jerena aza ny fatran'ny fanafody ra, dia mbola misy fiatraikany lehibe amin'ny bakteria sasany ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 6 ora, izay manaporofo ny vokadratsy taorian'ny bakteria.
Inona ny Erythromycin?
Erythromycine dia novokarin'ny streptomycine ary antibiotika macrolide. Ny fotony maimaimpoana dia ampiasaina amin'ny vava, ary ny lactobionate ho an'ny tsindrona. Ho fanampin'izany, mbola misy ny etil succaminate, ny dodecyl sulfate an'ny propionate ho fampiasana fanafody.
Erythromycin dia afaka miditra ao amin'ny fonon'ny sela bakteria ary mifamatotra amin'ny faritra 50S an'ny ribosome bakteria eo akaikin'ny tranokala mpanome (P site), manakana ny famindrana t-RNA tsy hamatotra ny tranokala P, ary miaraka amin'izay dia manakana ny rojo peptides avy amin'ny ny tranokala mpandray (Toerana iray) mankany amin'ny tranokala P, amin'izay manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria.
Ny fatiantoka ny Lincolnomy, Macrolides, Quinolone ary Erythromycin
Antibiotika sasany ampiasaina amin'ny fiompiana, akoho amam-borona ary aquaculture ny fisorohana ny aretina sy ny fanampiana ara-tsakafo dia horaisina na ovaina ao amin'ny zavamananaina ary hofoanana amin'ny vatana amin'ny endrika metabolite. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahany lehibe (manodidina ny 85%) dia hesorina tsy ho ao amin'ny vatana amin'ny endrika fanafody prototipe ary miditra mivantana amin'ny tontolo iainana.
Ny fatran'ny antibiotika amin'ny rano tontolo iainana dia matetika ny habetsahan'ny (ng / L). Ny fikarohana mifandraika ankehitriny dia mampiseho fa ny residu antibiotika amin'ny rano ambonin'ny rano sy rano fisotro any amin'ny firenena manerantany dia mahazatra. Ohatra, 21 ny sisa tavela amin'ny antibiotika hita tao amin'ny renirano 139 tany amin'ny fanjakana 30 tany Etazonia, ary ny sulfonamides kosa dia hita tao amin'ny Yangtze River Delta sy ny Pearl River Delta any Shina.
Ny fampiasana antibiotika dia hahatonga ny microorganisma pathogenika hampivelatra ny fanoherana zava-mahadomelina, ka hitombo hatrany ny fatra mahomby amin'ny antibiotika hamonoana bakteria.
The fototarazo fanoherana azo ampitaina hatramin'ny taranaka fara mandimby, ary azo ampitaina amin'ny bakteria isan-karazany. Noho izany, na dia bakteria tsy mahazaka fanafody aza ny sasany dia tsy mahazaka bakteria pathogenika. Ny fitomboana sy ny fiparitahan'ny bakteria pathogenika tsy mahazaka zava-mahadomelina dia mety hitera-doza amin'ny fahasalaman'ny olombelona.
Mandritra izany fotoana izany, ny fiaraha-miaina antibiotika marobe eo amin'ny tontolo iainana dia miteraka fepetra tsara amin'ny fitomboan'ny fanoherana ny zava-mahadomelina, indrindra ireo aretina mahazaka lakroa.
Endri-javatra amin'ny fitsapana Combo ho an'ny Kailomisinina Macamineides Quinolone
Fomba fitiliana ny fitsapana comboomyamine macrolides quinolone erythromycin combo
Ny ciromycin macrolides quinolone erythromycin combo test dia fitsapana volamena-chromatography volamena koloidaly izay mahatsikaritra ny lomomisinina, macrolides, quinolone ary erythromycna amin'ny ronono, vovo-dronono, ronono mipetaka ary mifanena amin'ny MRL EU. Ity kit ity dia azo ampiharina amin'ny fanandramana haingana eny an-toerana ataon'ny departemanta isan-karazany.
Santionany amin'ny fitsapana Combo amin'ny testosteron Quomyolone Erythromycin
Famaritana ny fetra amin'ny test an'nyomboomycine macrolides quinolone erythromycin combo
Ny maha-zava-dehibe ny fanandramana Comboomyamine Macrolides Quinolone Erythromycin Combo
Ny Lincolnomyamine Macrolides Quinolone Erythromycin Combo Test dia afaka manampy ny mpanamboatra, ny masoivoho mpanara-maso ary ny maso ny kalitaon'ny vokatra ary manampy ny olona hihazona ny fahasalamany.
Ireo mpiorina amin'ny fitsapana comboomyamine macrolides quinolone erythromycine test
Fitaovana ho an'ny fitsapana Comboomyamine Macrolides Quinolone Erythromycin Combo
2. Mini Pipette & Tip Pipette
Ahoana ny fampiasana ny fitsapana comboomyamine macrolides quinolone erythromycin test?
Fony nampiasa antibiotika tamin'ny olombelona ny olona voalohany dia noheverinay ho "nostrum" izy ireo. Raha mbola mihombo ny olan'ny fanararaotana antibiotika, dia nitondra fahavoazana lehibe ho an'ny olombelona koa ny fanoheran'izy ireo.
Ahoana ny fomba hanafarana fitsapana Combo amin'ny fanaovana lomotra?